Iwe unoda chibvumirano chechikoro chemotokari kuti utungamirire zviri pamutemo chitima kana motokari kupfuura 50cc mu Washington.
Kune Nzira mbiri
1. Kupfuura chiratidzo chechikoro chemotokari (chinokubvumira kuwana mvumo yekuraira). Uye kupfuura motokari yekutasva muedzo. Iyi nzira inokubhadhara iwe madhora 25.
2. Enda kuchikoro chekudzidzisa chikoro. Apo makirasi anopiwa nezvemarudzi ose emotokari kudzidzisa kusanganisira scooters uye trikes.
Mushure mokunge wapedza kugadzirisa chikoro, unogona kutora kadhi yako yekupedzisa kune DMV kuti uwane kugonesa kwechikoro chechikoro pane rako reisense. Iyi nzira ichakutora iwe $ 250 isingabatsirwi nekuwedzera kubhadhara DMV $ 25 nokuda kwekubvumirwa kune rako reisense (kuvonga kubviswa kwebhajheji). Kana kana iwe uchikwanisa kupinda mukirasi inobhadhara ichakutora $ 125 pamwe ne $ 25 paDMV yekubvumirwa pane rako reisense.
Chinofanira Kuziva Usati Wanyora
Izvo vanhu vakawanda vasingazivi ndezvokuti zvinotyisa uye zvinokonzera motokari chikoro chiri kuWashington State. Kuti uwane chikamu chako chemotokari kuburikidza nedzidzo, iwe uchapedza kwevhiki rose kubva 9am kusvika 6:30 pm mukurovedza (pane mafundo emisi matatu). Chero nzira, iwe uchange uine bhasikoro (kuti ivo vanopa uye havagoni kukukodzera iwe zvakanaka) kwemaawa masere kusvika kwemazuva maviri. Kana iwe usati wambojaira kuzvienzanisa uye kubatisisa motokari kana scooter kwemaawa panguva ino izvi zvichakupfekedza nokukurumidza uye kuchengeteka kwako kuchava pangozi.
Chikamu chekutanga chezuva chinopedzwa mukirasi yekugadzirira iwe kuti utore rugwaro rwakanyorwa (ibhuku rakavharwa uye rakapiwa iwe kuti utore mangwanani ezuva maviri). Chikamu chechipiri chezuva ramuchapedza maawa mana kusvika mashanu pachiteshi kana motokari apo iwe unosundirwa kupora mapfumbamwe. Iyi purogiramu inodzokorora pazuva repiri pamwe nekutora kuongororwa kwakanyorwa, uye mamwe maawa mana pabhasikoro ichikudzidzira humwe hutano hutsva uye hurairi husati wasvika pakupedzisira kutora kuongorora kwekufambisa pamagumo ekudzidzira iwe kana wakaneta kwazvo.
Munguva ichangobva kucherechedza Evergreen Safety Council (ESC) muKirkland, WA (iri mavhiki ekupedzisira motokari yekirasi), pazuva rimwe vanhu vaviri vakanga vachigunun'una nezvekunzwa vaneta. Nenguva yekupedzisira maawa maviri ekupera kwemavhiki ekupedzisira vanhu vaviri mukirasi yevanegumi 12 vakanga vadonha mabhasikoro avo. Mumwe aifanira kugara mukirasi, mumwe wacho akakundikana kirasi.
"Chinangwa" chechikoro chekuchengetedza motokari ndechekuti:
"Mutevedzeri uye simbisai motokari yakachengeteka iri kutasva kuburikidza nepurogiramu yepamusoro yevatasvi vemakwikwi uye mapurogiramu ehurumende ehurumende muWashington.
Zvinosuruvarisa, izvi hazvisizvo.
Sezvinoitika dzimwe dzebhazi dzisina kushanda zvakanaka. Vadzidzisi (kuKirkland iyo vhiki yevhiki ivo vaiva Garcien naChris) vakabvuma kuziva kuti havana kushanda zvakanaka uye vachiri kurega vadzidzi vadzidzise. Motokari yemumwe mudzidzi haaizogara mune zvematongerwo enyika kuitira kuti mudzidzi aifanira kufambisa ruoko rwavo pamabhatiki kwemaawa panguva imwe kwemazuva maviri akatarisa.
Mumwe mudzidzi aive akaremara mumuviri uye ainge aita zvakanaka munguva yose yekambani akanga atorerwa parutivi nemudzidzisi, Garcien, pazuva repiri uye akabvunzwa kana vakanga vakanaka nokuti vakaita sevari kunze kwezuva iroro. Mudzidzi akabvuma "kunzwa akaneta." Panzvimbo pokunzwa mudzidzi uye kupa dzimwe nzira dzakachengeteka mudzidzi akamanikidzwa kuti apedze kirasi uye wechipiri kuti apedzise muviri, pazuva repiri, mudzidzi wacho akakanda bhasikoro ravo uye akanga akakuvara zvakanyanya paakaiswa pasi pakati pebhazikoro nesamende .
Zvose nekuda kwekuneta kwakanyanya mudzidzi akakundikana kirasi.
Izvo izvo mudzidzi uyo akazviona mushure mekunge zvingakushamisa iwe. Mudzidzi wacho akapihwa kuti atore zvakare chikamu chekupedzisira chechikoro vhiki inotevera. Kana izvi zvakapiwa mudzidzi kweawa imwe chete vasati vabvuma "kunzwa vachineta" chiitiko chacho chingave chakadziviswa uye mudzidzi haazokuvadzwa. Mushure mekupedzisira Gara Garcien akabvuma kumudzidzi kuti akakundikana iyo yaaidzidza kuti mudzidzi akakundikana nekuda kwekuneta.
Mudzidzi akakuvadzwa (uyo akachera uye akacheka mavoti, madutu uye machena ebhuruu kumativi ose maviri nemakumbo uye mabvi uye akasiyiwa nehombodo uye asina kupiwa rubatsiro rwekutanga) akaudzwawo kuti vaizogamuchira mutevedzeri kumhanya zuva rakatevera kuronga inshuwarisi ye chiremba anoshanyira. Izvi hazvina kumboitika. Chikumbiro kuMukuru wepurogiramu, Monty, yakatsigira kuti haibvumi inshuwarisi yevakuvadzwa vadzidzi (chete yekondari).
Uyewo, hapana makirasi akaregererwa nekuda kwemamiriro ekunze (mumakore matanhatu apfuura kirasi imwe chete yakabviswa nokuti murayiridzi aisagona kuona vadzidzi vake mune dutu guru remvura). Nokudaro, kana kunaya, kupera, kana kuti iwe ucharamba uchitasva nekuedza. Kana mamiriro ekunze mukati mezhizha anopfuura makumi masere digiri muchikoro iwe unotarisirwa kuti ugare uchipfeka magetsi akawanda, bheti refu, magirazi ehombodo, pamusoro pezvingwa zvechikwama uye helmets (zviri pachena kuti zvikonzero zvekuchengeteka). Ramba uchifunga mupfungwa iyi izvi zvichaita simba rako zvakare.
Kana ukaronga kutora chikoro chokuwana motokari yako yekugadzirisa kuve nechokwadi kuti uri mumuviri wakagadzirira kuita izvi (kuva musikana ane maitiro asingakwanisi iwe chaizvoizvo unoda kushandiswa kuenzanisa nekusimudza bhasikoro kwemaawa panguva imwe kunyange kunzvimbo yakanyanyisa). Iwe unogona kukuvara zvakakomba nekuda kwekuneta. Uye hazvishamisi nokuti zvidzidzo zvinonzi zvakagadzirwa kuti uone kuti unonzwisisa dambudziko rako rokutakura motokari uye kirasi inokudzidzisa kuziva nguva yekuisa bhasikoro rako kana wakaneta.
Asi mune aya maitiro nzira chete yaunowana kuti uise bhasikoro rako kubva kuneta ndeyekuti iwe unowira uye ukakuvara kutanga. Mutungamiri Monty pa ESC akati zvakanakisisa paakabvunzwa kuti nei mudzidzi asina kupiwa mukana wekudzokazve kuedza kwekukwira nekuda kwekuneta (nokuchengeta kuchengetedzwa kwevadzidzi mupfungwa), mhinduro yaMonty: "Izvozvo zvingangova kuronga kurohwa kwatinoita isu. " Funga kuti zviri nani kurega mudzidzi akuvara.
Uye yeuka kana iwe ukakundira kirasi uye usanzwa uchitorazve kuchengeteka neE ES hapana zvipo zvekubhadhara uye hapana kuendeswa kwebasa rakapedzwa neDMV. Iwe une chisarudzo chimwechete kana iwe uchida kubhadhara mari, kuwana gweta.
Bellingham Gay Bars Bhuku
Mashoko Anofadza NezveGomo St Helens
Mitemo Inoshandiswa Kurondedzera Pacific Northwest-West Weather
Mhuri Ichada Zvinhu Zvakakosha paAzul Sensatori Resort
Ndiyo 7 Inofanirwa Ikutenderera Kuenderera Kwekutenga muna 2018
June Weather in Las Vegas; Zvaunotarisira
Ziva Kuziva Zvivako zveLouisville
Kwokuwana Imba Yechichato ne Flair muBrooklyn, NY
Rudo pamutengo webhajeti: Zuva risingakoshi Mazano kuVancouver, BC
Los Angeles Museums Children's Museums
Nzvimbo dzepamusoro dzeMicro Star Star French kuParis
Pamusoro peCaribbean Volunteer Travel Opportunities
Mazano Okushanyira Paris muChizha
Charlotte-Douglas International Airport Shops uye Zvokudya
10 Best Hotels in Mathura & Vrindavan yeZvose Mari